Ndi mmadu obula: Gbanwee ndi oru gi n’ime ihe nnozi ngbako | Martech Zone
Saturday, October 20, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Onye obula bu onye ndu ndi oru nke ndi mmadu na ndi mmadu na-ere ahia nke na-enye ndi ahia ya ihe ngbako nke 1,750 site na onye oru, 200% abawanye na pipeline ire ere, 48% nnukwu ahia nha, mmụba 4x na mmata ihe, na otu ụzọ n'ụzọ iri nke ụgwọ nke akwụ ụgwọ ihe omume mmekọrịta.
Kedu ihe kpatara eji eme ndị ọrụ?
Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ihe dị ike, na-enwetaghị akụ nwere ikike ịkọwanye ahịa, ịre ahịa ahịa na inye ndị ọrụ ikike ọrụ ikike; olu na netwọkụ nke ndị ọrụ gị. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị ọrụ nwere 5x iru karịa ihe ndekọ ụlọ ọrụ gị na ndị na-eso ụzọ ha nwere ike ịtụgharị 7x.
EverySocial na-etu ọnụ maka njikọ aka ndị ọrụ kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọrụ na-etinye aka na obi ụtọ banyere ọdịnaya site na ikpo okwu na mmemme nke nwere ndepụta ọdịnaya ahaziri iche, gamification, leaderboards, and mobile applications.
Atụmatụ mmekọrịta gụnyere:
Jikwaa ndị ọrụ gị - Kenye ndị ọrụ n'otu n'otu, kọwaa ihe ndị dị mkpa, setịpụ ikikere, ma nweta akụkọ banyere ọrụ ha
Push nke Gị, nke mbụ - Push ndị ọrụ gị ọdịnaya gị gụnyere ederede blọọgụ, nkwalite, mgbasa akụkọ, vidiyo, na mmelite ọnọdụ
Ọdịnaya na-atọ ụtọ na mkpịsị aka gị - Mee ka ederede akụkọ, blọọgụ na vidiyo kesaa ndị ọrụ gị ọsọ ọsọ
Nọgidenụ na-eche ihu na Center - Ọdịnaya ọ bụla ndị ọrụ gị na - ekere (gụnyere ọdịnaya agboro) na - eburu aha njirimara gị yana oku ime ihe
Ndị Isi Nduzi Na-etinye Aka Ha - Na akpaghị aka n'ịwa na zipu a ndú osisi email gị na-akwado na-kwubara ha dabere na ọrụ
Ekwentị mkpanaka, Weebụ, ozi ntanetị - Branddị na 3rd otu ọdịnaya
Ntị na-ege ntị - nyochaa ndị mmadụ, ụlọ ọrụ, akwụkwọ mgbasa ozi, mgbasa ozi pịa, wdg iji nọrọ n'elu ndị asọmpi gị, ndị ahịa gị, ndị mmekọ gị na ndị ọzọ metụtara.
Azụmahịa na-ere - Nye ndị na-erere gị ọdịnaya na ngwaọrụ ha chọrọ ijikọ na ndị na-azụ ahịa gafee mgbasa ozi mgbasa ozi na ọwa dijitalụ ndị ọzọ. EverySocial bụ azịza zuru ezu nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ndị otu ahịa ahịa na Dell, Adobe, ADP, na Genesys ji.
Nchịkọta Na Ihe Niile - Ghọta nke ọma onye na-ekekọrịta ọdịnaya, netwọkụ, yana njikọ aka ọ na-anya maka nzukọ gị
A na-ejikọta onye ọ bụlaSocial na Bit.ly, Hubspot, Adobe Analytics, Marketo, Slack, Yammer, Eloqua, Sharepoint, Google Analytics, na Salesforce.
Tags: Adobe nchịkọtaandroidBit.lybitlyokwuọrụọrụ nkwadoejuputaGoogle Analyticsokpokoroiosahịandị ahịantụgharị ucheslackmmụba mmekọrịtana-elekọta mmadụ na-ege ntịnlekota orunkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ na-ereyammer
Aug 5, 2013 na 3:31 PM
Hey Doug - Daalụ maka nnukwu mpempe! Buru ọtụtụ ihe ọ gettingụ na-eme ka mmadụ niile si na ala pụọ ​​ma na-arụ ọrụ w / ndị ahịa. Ihe ndị ọzọ dị jụụ na-abịa. 🙂